Nadwo looga hadlayo مداخل الشيطان oo lagu qabtay magaalada Hargeysa
March 3, 2013 - Written by
Hargeysa:-Nadwo cilimiyeed si weyn looga soo qeyb galay ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland waxaana nadwada lagu qabtay Masjid Al-Hudaa waxaa nadwada cinwaankeeda uu ahaa مداخل الشيطان waxayana culumada aad u bayaaniyeed sida Shaydaanka uu u lumiyo dadka iyo meelaha uu ka soo galo
Culumada ayaa waxaa kale oo ay Nadwada ku soo qaadeen dilkii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax Raximahulaah oo ay Al-Shabaab ku dileen gudaha masjidka Bader xili uu ku jiray salaadii casar waxayna culumada sheegeen in wiilka yar ee dilay Sheekh uu duufsaday Sheydaan kana soo galay dhinaca Shubahaadka isaga oo lagu qanciyey in Sheekh C/qaadir Nuur Faarax uu yahay Gaal dhiigiisana uu banaanyahay.
Culumada ayaa sidoo kale umada uga digay dhalinta in aysan ku kadsoomin fikirka guracan oo lagu baneysano dhiiga culumada iyo Umada Soomaaliyeed waxayna ku waaniyeen in ay bartaan diinta kuna dadaalaan cilmiga sharciga ah.
Nadwada ayaa waxaa uu cinwaankeedu ahaa مداخل الشيطان waxaana ka qeyb galay culumada kala ah
1- Sh. Dr. Bashiir Axmed Salaad
2- Sh. C/qani Aw saalax Cali
3- Sh. Yuusuf Aadam Maxamed
4- Sh. Maxamed Cali Geedi
5- Sh. Maxamuud Axmed ( Abu Shayba)